Uwe bụ ndị agha. Egwuregwu ndị uwe na uwe ụmụ nwanyị. Uwe nwanyi bu ndi agha.
N'ihe dị iche iche uwe agha na-arụsi ọrụ ike, nke dị irè ma dị mma na-adabara adaba kwa ụbọchị. N'oge na-adịbeghị anya, ụdị a aghọọla ewu ewu na ndị inyom ejiji na ụwa nile, ọ bụghị naanị ụmụ agbọghọ, kamakwa n'ime ụmụ nwanyị meworo agadi.
Egwuregwu ndị uwe na uwe ụmụ nwanyị
Akụkụ kachasị mkpa nke ụdị a bụ nṅomi nke uwe agha. Uwe uwe agha nile nke ndi nwanyi bu akara site n'ikwu n 'uzo doro anya na ihe doro anya. Na mgbakwunye, a na-eji nkọcha na enweghi ihe ọkpụkpụ na-eme ka a hazie ya. Ka o sina dị, nke a apụtaghị na ihe eji ekpuchi ákwà ndị metụtara ụdị a adịghị mma. A na - ejikarị ụdị àgwà agha eme ihe:
epaulets na apata;
ihe na agba;
bọtịnụ ígwè na brooches;
iwu a na-achọ mma na nrite.
A na-ele nhọrọ a anya dịka onye ntorobịa nke ụdị a. Kazhual-ndị agha pụtara na USA n'afọ ndị 1960 ma ghọọ ụdị mkpesa megide Vietnam Agha. Ka ọ dị ugbu a, Kazhual uwe ndị agha maka ndị inyom dị iche iche dị ugbu a na nchịkọta nke ọtụtụ ndị na-ewu ụlọ na ụlọ ejiji. Uzo ya di iche iche bu ihe di iche iche na-adighi nma, ihe dika ihe ndi choro ihe ndi a choro ka enweghi. Ndị nnọchianya ndị agha nke agha-ụdị ndị agha gụnyere ndị na-esonụ:
a jaket-bomber bụ ihe dị mkpụmkpụ, nke prototype nke bụ jaket nke ụgbọelu-bọmbụ nke 50s nke narị afọ nke 20;
jaket "natovka" - mmewere nke ejiji American agha nke 1965 na nnukwu akpa ego na ngwugwu ;
ogige - oghere elongated na mkpuchi nke a na-eji ajị anụ, bụ nke e bu n'obi iji chebe ndị na-anya ụgbọ mmiri site na ifufe na-atụgharị oyi.
A na-ejikarị akpụkpọ ụkwụ ndị agha dị elu na-eme ka onyinyo nwanyi dị n'ụdị nke kazhual-agha na-agbazi (bertsami) ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ. Na mgbakwunye, ihe dị otú a dị mfe iji jikọta na ihe ndị ọzọ nke ejiji, ha dị mma maka ngwaahịa ndị metụtara ụdị egwuregwu ahụ, yana ụfọdụ ụdị maka ejiji kwa ụbọchị.
Egwuregwu eji ejiji ndị agha
A na-eji ihe ndị agha na-eme maka ịgba egwu maka ihe egwuregwu. Ka ọ dị ugbu a, nke a apụtaghị na ọ bụrụ na e jiri uwe na-acha akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ-agba aja aja, ọ ga-abụrịrị na ọ bụ ya ga-eme ka ọ bụrụ uwe ndị agha. Ụdị dịgasị iche iche na-enye nwa agbọghọ ọ bụla ohere ịhọrọ ihe ọ ga-amasị, tinyere ihe nke azure, lilac, ọlaọcha na uwe akwa odo.
A na-eji ejiji ndị agha
A pụrụ iji edozi ndị uwe ojii maka nkpuchi kwa ụbọchị ma ọ bụ ikere òkè n'ememe dị egwu. N'otu oge ahụ, ejiji uwe agha kwa ụbọchị dabeere na ngwaahịa ndị e ji eji akwa ákwà ma ọ bụ ihe ndị e ji emepụta ma ọ bụ ihe ndị dị ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ụdị nke ntụziaka a na-agụnye nchara ejiji ma ọ bụ ịchapu ya, nakwa dịka uwe dị iche iche na uwe elu. Dị ka isi ihe ejiji ebe a na-eji akpa ego, lanterns na akpa.
Uwe ndị uwe ojii
Ụdị ndị ntorobịa nke ụdị a na-ejikọta omenala hippie, nke dịkarịsịrị na 1960. Ugbu a, dịka n'oge ahụ, ụmụ agbọghọ na-ejiji ejiji dị ka uwe na-eyi uwe elu, uwe na-acha ọcha, ndị na-adịghị ike na ihe ndị yiri ya. Uwe eji ejiji n'uwe nke nwa agbogho a na-eji ulo ndi a ma ama Ed Hardy, na nchikota nke obula a na-enwe ihe ohuru ndi ozo site na ihe ndi ozo ma obu ihe omimi oliv. Dị ka a na-achị, a na-eji ụdị mpempe akwụkwọ, agbụ, rivets na broderieies emepụta ngwaahịa dị iche iche n'ụdị tattoos.
Uwe akwa uwe agha
Ụdị agha nke ejiji bụ ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche n'enweghị uwe elu, gụnyere, na nke a na-atụ anya maka oge oyi. Ọ na-agụnye jaket ndị a kwadoro na uwe nke ụdị ihe a ma ama. Ndabere nke ụdị ngwaahịa ndị a bụ uwe ejiji na Jetetị - ihe eji mara mma, nke a na-ejikarị eme ihe na mba dị iche iche.
Uwe oyi na ụdị agha ga-enwerịrị ihe dị mma na ihe doro anya nke ubu. Ọ nwere ike ịmepụta akara ubu ma ọ bụ chọọ epaulets. Tụkwasị na nke a, ndị na-emepụta na-agbakwụnye ụdị ihe ndị a site na ngwugwu, ngwongwo na-agbanye ọkụ, ihe mkpuchi belt, belt, hoods na nnukwu akpa ego. A na-ejikarị ígwè, bọtịnụ, na ihe eji achọ mma na ihe ndị ahụ.
Uwe agha agha
A na-egosipụta ụdị ejiji a na nchịkọta nke ọtụtụ ndị na-emepụta ihe, ma ihe ndị kachasị ewu ewu maka ndị inyom dị iche iche bụ ụdị uwe ndị a:
Nnukwu mkpụrụ ahịa ndị na-agba ọsọ bụ nke German na akụkọ ihe mere eme nke ihe karịrị afọ 30. A na-ahụ maka mmepụta nke ihe maka ịgagharị kwa ụbọchị na ihe ndị a na-eme n'èzí, na-ejikọta ihe dị iche iche nke ọkpụkpụ na nkwekọrịta;
Alpha Industries bụ akụkọ ntụrụndụ nke na-enye ihe dịgasị iche iche maka ngwaahịa maka ịha ahụ kwa ụbọchị. Nhọrọ dị ukwuu nke uwe agha na-enye nwa agbọghọ na nwanyị ọ bụla aka ịchọta jaket kwesịrị ekwesị, T-uwe elu, obere ọkpa, uwe akwa na ihe ndị ọzọ na-atọ gị uto;
Thor Steinar bụ onye ọrụ German ọzọ, nke e guzobere n'afọ 1998. Uwe agha, nke e nyere n'okpuru akara a, dị iche iche na ngwaahịa nke ụdị ndị ọzọ na ụdị a pụrụ iche na nke a ma ama;
Nord Storm bụ obere nwa ma dị egwu nke na-emepụta ngwaahịa bụ maka ndị na-eto eto. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ụdị ngwaahịa nke ika a na-eme ka onye ọ bụla n'ime ụmụ nwanyị mara mma na-eme nhọrọ ziri ezi.
Kedu otu eji edozi nwa agbọghọ?
Na-eji akwa sneakers
Kedu ka esi esi ghọọ stylist?
Kedu ihe ị ga-eme akpụkpọ ụkwụ ụkwụ?
Ụdị nke Summer 2013
Ihe ojoo ojoo na abuo ndi mmadu ndi ozo bu nke i maghi
Nwa a nwere mmiri ara ara?
Igwe ọgụgụ isi
Ndị nlekọta na-emerụ ahụ ike
Nri na tartlets
Mesotherapy ihu hyaluronic acid ihu
Mick Jagger gbara otu nwa okorobịa na-ahụ n'anya ka ọ gbakọọ na nne nwa ya
Bend nke gallbladder na nwa
MRI nke imeju
Okooko osisi sitere na akwukwo akwukwo aka ha
Mint uwe akwa
Ọrụ nke nne na nna maka ịzụ ụmụ
Chọọchị San Francisco
Ọ ga-ekwe omume ka kukumba ka nwa ara na-amụ nwa?
Ihe ngosi nke Zodiac
Kedu ka esi eme mpịakọta akwụkwọ?